Ndezvipi zvinonzi SEO zvinhu zvinonyanya kuvimbiswa nemhando dzose yekutsvaga injini ye backlinks?
Mazuva ano, kutsvaga kwenyika kunozivikanwa kushanda nehuwandu hwehutano hwegorgorithm, iyo inotenderera pamusoro pezvinhu mazana maviri zvakasiyana. Pakati pevamwe, Google yekutsvaga injini inoongorora backlinks yehupfumi hwehuwandu hwewebsite uchishandisa anenge gumi nemaitiro akasiyana eokumanikidza SEO. Asati akuratidze izvo zvinonyatsofungidzirwa neGoogle kuti "kunzwisisa" kukosha kwakakwana kweese backlink paWebhu, regai nditange nemamwe masayenzi ekutanga.
Chii Chinogadzira Backlink?
Chokutanga uye chakakosha, chii chinonzi backlink nechirevo? Kufanana neGoogle pachake, injini huru yekutsvakurudza inoratidza kumashure kunofambisa kana kuti inoshamwaridzana kubva kune imwe yevashandi vekutsvaga paIndaneti, kudzokera kune yako webhusaiti. Uye ngatitarisane nazvo - pakutanga gore rino pane yekutanga yakanyatsotaridzika yakambotaurwa nevakuru veGoogle pamusoro pehuwandu hwehupano hwekubatana huri pakati pezvinhu zvitatu zvepamusoro. Ndokusaka Google injini yekutsvaga inopa backlinks kukoshesa zvakanyanya ikozvino. Kuisa pachena, ivo "mavhoti" ekuvimbiswa, izvo zvinosimbisa hutano hwebasa rekuchengetedzwa pakati pevashandisi uye kusimbisa hutano hweji peji peji pane zvose.
Chinhu ichi ndechekuti "iyo yakakodzera" webhusaiti yehutanhi pahuwandu inoreva kuti peji imwe yese inotendwa nevashandi vari kurarama, nyanzvi dzezvemabhizimusi (kana kuti vatengesi vemashamba emisika), pamwe chete mamwe mawebhusayithi ane kodzero kana ma blogs, uye huru dzekutsvaga injini shure kwezvose. Cherechedza, zvisinei, kuti chero nzvimbo ipi neipi yepaIndaneti ine simba guru haireve kureva kuti ndeimwe yevaparidzi vanoshanyira zvakanyanya yekutengeswa kwenyika yose. Mushure mezvose, kana mumwe ari kutamba bhuroki remavara kana webhusaiti ane chinhu chakasiyana-siyana, chinokosha, uye chakakosha - chinyorwa ichocho chinogonawo kunyatsoonekwa, zvichida kunyange chiri nani kudarika vazhinji. Nenzira iyo, injini yekutsvaga yese inovimbisa backlinks kusarudza kana webhusaiti kana bhuroti zvakakodzera kukuratidza pakati pemigumisiro yepamusoro paSERPs.
Google Search Engine Inoongorora Backlinks ne:
mumwe munhu anotumira nzvimbo yekubatanidza kune peji imwe neimwe yewebsite yako kana blog;
kuwirirana maonero (i. e. , yakagadzirwa nechekare kumashure, isina kukwana PageRank, ichibva munzvimbo dzakasiyana-siyana paWebhe sezvinobvira);
pagerank (PR), chiremera chinzvimbo (DA), uye nepamusoro pepamusoro (PA) yega rega yepaIndaneti inobatanidza pamapeji ewebhu (i. e. , zviri nani zvikuru kuti uve nechekare kumashure ane masimba makuru uye kuvimba, kwete pane boka guru rezviduku-duku);
kumashure kunobva kune vakwegura mazita kazhinji vanoonekwa zvakakosha kudarika avo vanobva kuzvidzvara zvitsva vaenda kurarama munguva pfupi yapfuura;
mawebsite akakodzera kana mablogi achapa zvikwereti zvakasununguka kumashure zvakakosha zvikuru kana zvichienzaniswa neshamwari dzisina kufanira uye dzisingabatsiri dzinobva kunzvimbo dzisingawani;
kushandira Black-Hat SEO (somuenzaniso inosanganisira mapurazi, mazamu epepamu, mapeji emasuwo, mairi mavhiri, zvinyorwa zvakavanzika, nezvimwewo.) vane unhu hukuru hwekuunza huipi hwakaipa pahuwandu hwehuwandu hwewebsite;
mamiriro ezvinhu akawandisa anowirirana (i. e. , backlinks inowanikwa mumutauro mukuru webhuti yehutaneti) yakanyanya simba, panzvimbo yeimwe nzvimbo yese yepamusoro (zvisingaiti, zvishoma) zvakabatana zvinowanikwa mune zvakasiyana-siyana zvakasarudzwa, mapaji, kana zvimwe zvikamu zvepamusoro peji Source .